मानिसको शरीर बाहिर कोरोना भाइरस कति दिन बाँच्न सक्छ? वैज्ञानिकहरुले सार्वजनिक गरे यस्तो तथ्य:: Naya Nepal
मानिसको शरीर बाहिर कोरोना भाइरस कति दिन बाँच्न सक्छ? वैज्ञानिकहरुले सार्वजनिक गरे यस्तो तथ्य
कोरोना भाइरस ब्याङ्क नोट, फोन स्क्रीन तथा स्टेनलेस स्टीलजस्ता सतहमा २८ दिनसम्म बाँचन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्।
अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय विज्ञान निकायले दिएको निचोड अनुसार यो भाइरस पहिले सोचेभन्दा लामो समय जीवित रहनसक्छ।
तर अनुसन्धानकर्ताहरूले यो प्रयोग अँध्यारो अवस्थामा गरेका हुन्। परावैजनी वा अल्ट्राभायोलेट किरणले भाइरसलाई मारिदिने उनीहरुको भनाई छ।
तर कतिपय विज्ञहरूले भने वास्तविक जीवनमा सतहबाट हुने सङ्क्रमणको जोखिमबारे शङ्का प्रकट गरेका छन्। यो भाइरस सामान्यतया मानिसहरूले खोक्दा, हाँच्छ्यू गर्दा वा बोल्दा सर्छ।
यसअघि प्रयोगशालाहरूमा गरिएका अध्ययनमा सार्स कोभ २ भाइरस ब्याङ्क नोट वा ग्लास सतहमा २ देखि ३ दिनसम्म अनि प्लास्टिक तथा स्टीलमा ६ दिनसम्म बाँच्न सक्ने देखाएको थियो। भिन्न भिन्न अनुसन्धानको नतीजा फरक देखिने गरेको छ।
‘सतहहरूमा भाइरस कत्तिको सक्रिय रहन्छ भनेर स्थापित गर्न सकिएको खण्डमा यसको सङ्क्रमणको अनुमान तथा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ र मानिसहरूलाई जोगाउन सकिन्छ,’ सिसिरोका प्रमुख कार्यकारी डा.ल्यारी मार्शलले भने।
तर कार्डिफ विश्वविद्यालयका कमन कोल्ड सेन्टरका पूर्व प्रमुख प्राध्यापक रन एकल्सले उक्त अनुसन्धानको आलोचना गर्दै २८ दिनसम्म भाइरस बाँच्न सक्छ भनेर आम मानिसमाझ अनावश्यक त्रास फैलाइएको बताए।
‘महामारीको सुरुमा सतह वा निर्जीव वस्तुमार्फत् सङ्क्रमण सर्ने निकै त्रास थियो। तर अहिले हामीले यसको मुख्य कारण कुनै सतह छोएर अनि त्यसपछि आँखा छोएर सर्ने होइन रहेछ भन्ने थाहा पाएका छौँ। मुख्य कारण त थाहा नपाइकनै कसैले आफ्नो नाक वा मुखबाट निकालिरहेको भाइरसको नजिक पर्नु नै हो,’ उनले भनिन्।
नेपालमा उच्चशिक्षाबारे मिलन पाण्डेले हालै नयाँ पत्रिकामा एउटा महत्वपूर्ण विषय उठाउनुभएको छ। आफूलाई एक इन्जिनियरको रुपमा परिचित गराउने पाण्डेले नेपालका ‘टपर’ विद्यार्थीहरुलाई भने मेडिसिन तथा इन्जिनियरिङजस्ता विषयको साटो आर्टस् पढ्न सुझाउनु भएको छ।